Vaovao - nitondra vokany lehibe sy fitsapana ho an'ny indostrian'ny mpivarotra eran-tany ny Covid-19
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, ny fipoahan'ny coVID-19 tampoka dia nahatonga ny indostrian'ny mpivarotra eran-tany, anisan'izany ny indostrian'ny akanjo, hanana fiatraikany lehibe sy fitsapana. Teo ambany fitarihan'ny komity foibe CPC, ny fihatsaran'ny areti-mifindra sy ny fifehezana ny valan'aretina any Shina dia nihatsara hatrany, ny famokarana sy ny filaminan'ny fiainana dia naverina tamin'ny laoniny haingana kokoa, ny tsenan'ny mpanjifa dia nitohy niverina tsy tapaka ary ny mpanjifa niandalana. nampitombo ny fahavononany sy ny fahatokisany amin'ny fandaniana. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona tamin'ny taona 2020, ny varotra antsinjarany ny entan'ny mpanjifa dia 17,23 trillion yuan, nihena 11,4% isan-taona ary 7.6 isan-jato kosa ny isan'ny isan-jato noho ny tamin'ny telovolana voalohany. Anisan'izany ny fivarotana entam-barotra. Tamin'ny volana Jona, ny varotra antsinjarany dia nahatratra hatramin'ny 3 trillion yuan tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Nanafaingana ny fanarenana, nitohy nidina tsy tapaka ny tsenan'ny mpanjifa, ary nanjary vonona sy natoky tena kokoa ny mpanjifa handany. Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona tamin'ny taona 2020, ny varotra antsinjarany ny entan'ny mpanjifa dia 17,23 trillion yuan, nihena 11,4% isan-taona ary 7.6 isan-jato kosa ny isan'ny isan-jato noho ny tamin'ny telovolana voalohany. Anisan'izany ny fivarotana entam-barotra. Tamin'ny volana Jona, ny varotra antsinjarany dia nahatratra hatramin'ny 3 trillion yuan tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Manoloana ny toe-javatra sarotra ankehitriny, dia mbola ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny akanjo. Izahay dia nanitrikitrika hatrany ny hamorona fanatanjahan-tena mahazatra eny ivelany. Tsy toy ny akanjo olon-dehibe, ny mpanjifa dia handinika ireo anton-javatra toy ny fampiononana, kalitao, marika ary famenoana rehefa mividy fitafiana ho an'ny ankizy fa tsy hoe "tsara tarehy" fotsiny. Izany dia satria ny ankizy dia eo amin'ny sehatry ny fitomboana ary manana fepetra ambony kokoa amin'ny akanjo akaiky, izay tsy maintsy miantoka fampiononana nefa tsy manimba ny fahasalamana.
Ny orinasanay dia orinasam-barotra avy any ivelany miaraka amin'ny fitafiana tsy mahazatra an'ny olon-dehibe sy akanjon'ny ankizy ho vokatra mitarika, lamba azo tanterahina tantera-drano sy azo iainana, fahaiza-manao kanto, endrika endrika lamaody. Mino tanteraka izahay fa "tsy misy tsara indrindra, tsara kokoa ihany", ary miaina mifanaraka amin'ny ny safidy sy ny fahatokisana ny fanatanjahan-tena any ivelany